Soro na Ahịa Browser Market Share si Colts.com | Martech Zone
Mgbe m dere post na Ekekọrịta Ahịa Browser, ọtụtụ nzaghachi na post bụ na m ekwesịghị ịtụkwasị ọnụ ọgụgụ na W3Schools.com. M gbara ajụjụ a nzaghachi… gịnị mere na ụwa ga ọnụ ọgụgụ dị iche iche budata site na weebụsaịtị na weebụsaịtị?
Ọfọn, ekele ndị na-enye onyinye… Achọpụtara m na ọ dị mkpa! M hapụrụ ezigbo enyi Pat Coyle email ma jụọ ya ma ọ ga-adị njikere ịkekọrịta ụfọdụ ọnụ ọgụgụ site na Colts.com. Echere m bụ onye egwuregwu egwuregwu na-anụ ọkụ n'obi dị iche na onye na-eleta saịtị gbasara Teknụzụ Weebụ ọ ga-abụ ezigbo ntụnyere iji tụọ. Ma ọ bụ! Ndekọ ndị a dabere na ndị ọbịa 870,000 gara aga na Colts.com:
Colts.com Onye nleta Onye Nchọgharị Ego Share:
Colts.com Onye ọbịa na-eme Nchọgharị Nchọgharị - Nchịkọta:
Onye maara?! Aga m etinyekwu uche na nchịkọta ihe nchọgharị nọọrọ onwe ha site ugbu a gaa n'ihu mgbe m na-ele ha kama ịme echiche na oke ahịa. N'elu ederede, lee stats maka blọọgụ m maka ọnwa gara aga. Enwetụbeghị m anya na ha tupu, mana ị ga-ahụ ihe dị iche!
Nchọgharị Ihe nchọgharị maka ndị ọbịa m:
Anụla m nke a, ọ bụ ezie na ọ nwere ezi uche, mmadụ nwere ike ikwu na saịtị ọ bụla ga-ewepụta ihe nchọgharị dị iche iche gbasaa n'ihi ndị na-ege ntị pụrụ iche. Ọ ga-amasị m iche na ọ bụrụ na ị were stats niile gaa na weebụsaịtị kachasị ewu ewu ma jikọta ha, ị ga-enweta ihe ha nwetara. (Adịghị m enyocha ha data isi onwe m).
Amaara m na ọtụtụ ndị na-ede blọgụ na-ege ntị na Firefox, mana ndị Colts na-enweta ọha mmadụ.
Nnukwu data setịpụrụ, ekele maka ịkekọrịta. Ihe osise mara mma, kwa 🙂
LA Headshot Foto
Ọ dị m ka ndị na-agụ blọọgụ na-ejikarị Firefox eme ihe. Anaghị m eji Internet Explorer eme ihe otú ahụ. Ekwenyesiri m ike na ndị mmadụ na-ejikarị ya eme ihe.
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị na nke ahụ ga-abụ… mana data ahụ na-enye ihe akaebe na ị bụ eziokwu!
Obi dị m ụtọ na ị laghachiri nke a na stats dị iche iche na W3Schools, Achọrọ m ide okwu na-agbasa na post ahụ!
Isi ihe ekpughere n'ezie ebe a bụ na naanị stats dị mkpa bụ ndị maka saịtị ị na-atụle n'oge ahụ. Ọ bụrụ na ọmụmaatụ dịka saịtị gị ma ọ bụ saịtị Colts arụghị ọrụ na IE, ndị Colts ga-enwe nsogbu karịa gị. Saịtị ọ bụla ga-arụ ọrụ ya na ndị na-ege ya ntị yana ihe nchọgharị ha na-eji.
Dị ka mkpokọta ihe nchọgharị zuru oke n'oge ahụ, iji hụ ka Mozilla si eme, ọ ga-amasị m ịhụ stats nchọgharị Google!
PC Akụrụngwa Guy
Aug 30, 2007 na 8:37 PM
Egwuregwu kọmputa na-eji Firefox arụ ọrụ nke ọma karịa ọkara shmoe. M na-eji ha abụọ. Naanị m na-eji ntụgharị ugbu a m maara ya, mana m na-eji nwayọ na-aga n'ihu na Firefox. Karịsịa n'oge na-adịbeghị anya mgbe malware kụrụ gị ugboro abụọ n'otu ọnwa mgbe ị na-eji ntụgharị.
Sep 10, 2007 na 9: 58 AM
Daalụ maka post a! Ihe niile m huru rue taa bu stats sitere na teknụzụ dị arọ, yabụ ndị ọrụ nwere ike ịnwe mkpebi dị elu yana ihe nchọgharị ọzọ na ntụgharị. Ọ ga-amasị m ịhụ ihe mkpebi avg na colts.com bụ… Achọrọ m ịpụ na desiging maka 800x ma jiri 1024x dị ka ntọala m